Budata Ad-Aware Free Antivirus maka Windows
Budata Ad-Aware Free Antivirus
Free Budata maka Windows (1.99 MB)
Budata Ad-Aware Free Antivirus,
Ad-Aware Free Antivirus bụ mmemme nchekwa na-aga nke ọma nke na-ejikọta igbochi spyware dị elu yana mmemme antivirus siri ike ma na-echebe ndị ọrụ pụọ nụdị ihe iyi egwu mebere ọ bụla. Ijikọta atụmatụ abụọ dị iche iche na otu mmemme, ngwanrọ na-echebe ndị ọrụ megide trojans, ndị na-achọ, rootkits, bots na hacking omume.
Ọ bụ ezie na modul antivirus na-achọpụta ma na-ehichapụ ihe iyi egwu nje kachasị ewu ewu, modul spyware na-echebe ndị ọrụ megide mwakpo cyber ma hụ na nchekwa nke data nkeonwe gị.
Ad-Aware Free Antivirus na-enye ndị ọrụ ya ihe ngwọta nchekwa zuru oke, nke na-egbochi nbudata na-adịghị ize ndụ, chọpụta ihe iyi egwu email, na-echekwa okwuntughe maka akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta gị, na ịlele njikọ netwọk gị.
Ihe omume a, nke nwere interface enyi na enyi, nwere ike ịghọta ngwa ngwa ma jiri ya mee ihe site naka ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile. Ị nwere ike nyochaa kọmputa gị nụzọ dị mfe maka iyi egwu site na iji nhọrọ nyocha ọ bụla ngwa ngwa, zuru oke na nke omenala.
Ekele maka ọrụ nyocha ngwa ngwa, ọ nwere ike nyochaa akụkụ nke dị oke mkpa na sistemụ gị. Nihi ọrụ nyocha zuru ezu, ọ nwere ike nyochaa usoro gị nke ọma. Ekele maka ọrụ ọchụchọ pụrụ iche, ị nwere ike nyochaa akụkụ ndị achọrọ nke sistemụ gị.
Ọ bụrụ na Ad-Aware Free Antivirus achọpụta ihe iyi egwu ka emechara nyocha, ị nwere ike ịme kwarantaini, ihichapụ, gafere, ma ọ bụ kwe ka arụ ọrụ na ihe iyi egwu achọtara. Ọ bụrụ nịchọrọ, ịnwere ike inyocha sistemụ gị maka ụdị egwu egwu niile noge oge ị depụtara site na iji nhọrọ nyocha ahaziri.
Ekele maka ụdị egwuregwu ahụ, ị ​​​​nwere ike ịnwe nchedo nzuzo na-agba ọsọ na ndabere ma ị gaghị ezute ọkwa ọ bụla nke Ad-Aware mgbe ị nọ na ọnọdụ egwuregwu. Ịkwesighi ichegbu onwe gị noge a, nihi na engine antivirus ga-anọgide na-arụ ọrụ nke ọma na ndabere ma chebe kọmputa gị.
Mgbe ị na-enyocha ya na Ad-Aware Free Antivirus, nke na-eji akụrụngwa sistemụ na ọkwa dị oke oke, ịme ngwa ọzọ nazụ nwere ike itinye nnukwu nsogbu na sistemụ gị. Nihi nke a, ịghara ịrụ ọrụ na ngwa dị iche iche noge nyocha nkeonwe ga-emeghe ụzọ maka nyocha nke ọma na ngwa ngwa. Ihe omume a, nke nwere nkwado asụsụ English na nsụgharị ọhụrụ ya, ugbu a nwere ike iji ya mee ihe ngwa ngwa site na ndị ọrụ English na-enweghị asụsụ mba ọzọ.
Nihi ya, Ad-Aware Free Antivirus bụ otu nime nhọrọ mbụ nke ndị ọrụ chọrọ karịa ngwa antivirus. Ihe omume a, nke na-eme nchọpụta na ihichapụ na ndabere, na-enye ngwọta nchekwa dị irè maka ndị ọrụ niile. Maka ebumnuche ndị a niile, ana m akwado ndị ọrụ anyị Antivirus Free Ad-Aware.
Cheta na: Iji jiri mmemme nefu, ị ga-edebanye aha na akaụntụ email nke gị wee mee ka igodo ngwaahịa ezigara na adreesị ozi-e gị. Na mgbakwunye, anyị na-akwado ka ị ṅaa ntị na ntinye ntinye nke ngwanrọ ndị ọzọ nke ị na-ahụ noge ntinye nke mmemme ahụ.
Echefula ịlele ibe pụrụiche Ad-Aware Free Antivirus anyị kwadobere maka mmemme a.
Ad-Aware Free Antivirus Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.99 MB
Kacha ọhụrụ na: 20-11-2021